Semalt: Torolàlana SEO
Araka ny efa fantatsika, ny fomba fiasa mahomby indrindra dia ny fampiroboroboana ny entana sy ny serivisy amin'ny alàlan'ny Internet. Androany, tsy azo atao ny mahita orinasa tsy misy tranokala ara-barotra, satria io no fepetra voalohany amin'ny orin'asa. Saingy ny fananana tranonkala dia tsy miantoka fahombiazana raha tsy misy ny fampiroboroboana azy. Asa fanamby sarotra ny fampiroboroboana ny tranokala, izay tsy maintsy vitan'ny orinasa SEO matihanina fotsiny. Aza matoky ny mpisoloky anao tsy afaka mamaha ny olany manokana. Ny optimization SEO ho serivisy fampiroboroboana tranonkala dia zarain'ny fananan'i Semalt. Raha ny tena izy, ny Semalt dia tsy ny optimization SEO ihany fa ihany koa ny paikady stratejika ho an'ny fanatsarana farany.
Ireo tompona traikefa za-draharaha dia nanandrana niara-niasa tamin'ny tranokalan'ny tranokalan'izy ireo na natoky ny dabler amin'ity sehatra ity. Vokatr'izany dia simba ny orinasan'izy ireo. Ary tamin'ireto tranga ireto dia niangavy an'i Semalt ny olona mba hamonjy ny tranokalany, tsy mandà izahay. Nosintinay ara-bakiteny teo amin'ny faritra miadana ny tranokalany ary nanosika azy ireo ho eo amin'ny toerana ambony amin'ny motera fikarohana. Azonao vakiana tsara ao amin'ny tranokalanay ireo tranga ireo, ao anatin'izany ny valinteny tsara avy amin'ireo mpanjifa an'arivony. Semalt dia manana traikefa be sy matihanina avo lenta ary afaka miatrika ny asa sarotra. Afaka hahomby amin'ny optimization SEO ianao, raha tsy amin'ny Semalt no anaovanao izany .
Raha tsy misy ny haitao SEO manapaka, tsy hahatratra ny vokatra irinao ianao. Na izany aza, ny fahombiazana dia tsy miankina amin'ny fampiasana teknika sasany fotsiny. Zava-dehibe ny hitandremana ny fotoana sy fanatsarana paikady fanamafisana. Semalt dia mamolavola fomba vaovao hampiroboroboana tranonkala, hampihatra ireo teknolojia maoderina. Ny orinasa dia nametraka ny tenany ho mpitarika ny fampiroboroboana SEO ary goavambe manerantany amin'ny sehatry ny fampandrosoana web.
Ny ekipa Semalt dia ahitana ny matihanina manerantany amin'ny sehatra manokana. Ny samy manam-pahaizana manokana dia afaka miteny fiteny maro ary manana traikefa betsaka amin'ny optimization SEO. Ireo mpitantana za-draharaha, manam-pahaizana amin'ny SEO mahay, manam-pahaizana manokana momba ny IT ary ny vondron'ireo mpandika talenta. Ankoatra izay, mpamorona avo lenta koa dia miasa amin'ny ekipa. Alohan'ny hisafidianana vahaolana stratejika, ny manam-pahaizana dia mandray an-tanana ny antony rehetra miantraika amin'ny fahombiazan'ny fampiroboroboana ny tranokala. Ny tranokala tsirairay dia tetik'asa vaovao izay mitaky fomba fiasa manokana sy fomba fiasa farany.
Ny fampiroboroboana ny SEO amin'ny tranokalan'ny fikarohana dia mety ho an'ny ankamaroan'ny orinasa manolotra ny vokatra na serivisy amin'ny alàlan'ny Internet. Ity dia fomba iray mahomby amin'ny fakany ao amin'ny milina fikarohana mandritra ny fotoana maharitra ary mampitombo hatrany ny isan'ny mpitsidika. Ny Search Engine Optimization (SEO), amin'ny teny tsotra, dia andiany hetsika fihetsika anatiny sy ivelany izay mikendry ny hanatsara ny toeran'ny tranokala eo amin'ny milina fikarohana. Ka raha ny filaharany dia tokony ho toy ny milina fikarohana ny tranokala iray dia mila apetraka amin'ny fomba sarotra.
Ny fananana tranonkala dia tsy mitombina nefa tsy mampandroso izany. Raha tsy misy optimization dia ho ambany na aotra ny fivezivezena ny loharano raha tsy mampiasa fomba hafa mahasarika ny fifamoivoizana. Ny SEO dia mety ho an'ny olona mivarotra vokatra amin'ny Internet, mitady ireo mpanjifa, mpiara-miombonantoka sns ... Ny fanatsarana fikarohana ary ny fampiroboroboana tranonkala dia tsy mitsaha-mitombo. Nivoatra ny laharam-pahalalana amin'ny alemithma, nipoitra ny serivisy fanadihadiana vaovao ary koa ny fanaraha-maso ny valin'ny asa vita. Semalt dia mandray anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ny rafitra optimization SEO.
Ny fampiroboroboana ny tranokala SEO ao amin'ny motera fikarohana dia misy faritra telo lehibe: ivelany, optimization anatiny, ary fividianana an-tsoratra. Ny torolàlana tsirairay dia misy hetsika samihafa izay tokony atao amin'ny filaharana iray. Noho ny traikefa an-taonany maro ho fanatsarana ny optimization ny tranonkala, Semalt dia manolotra vahaolana sarotra toy ny AutoSEO, FullSEO, ary ny tranonkala fanadihadiana manam-pahaizana manokana. Ny fanentanana ireo fampielezan-kevitra ity dia manome fiakarana haingana amin'ny toerana ambony any amin'ny milina fikarohana. Diniho akaiky ny tsirairay amin'izy ireo.
Matoky tanteraka ny ankamaroan'ny tompona tranonkala fa ny AutoSEO no vahaolana tonga lafatra hamindrana ny tranokala amin'ireo toerana ambony indrindra ao amin'ny milina fikarohana. Tsy nahy izany, satria nitombo haingana be ny isan'ireo mpampiasa nahomby tamin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra ity. Ny AutoSEO dia misy dingana maromaro tsy maintsy arahana an-tsakany sy an-davany miaraka amin'ny manam-pahaizana manokana momba ny Semalt. Ireo manam-pahaizana manokana momba ny orinasa dia mandray andraikitra ihany koa amin'ny vokatra mahomby. Mandritra io dingana io dia hovana ny fanamafisana ny tranokala araka ny fepetra takiana. Ny fampiroboroboana ny milina fikarohana dia tsy isalasalana fa hahomby. Ireto misy andraikitra lehibe napetraka ho an'ny AutoSEO:
mifidy teny mety tsara;
fanitsiana ny tranonkala;
mamorona rohy mankany amin'ireo tranonkala mifandraika ery;
Ny fanentanana AutoSEO dia manomboka raha vao misoratra anarana ao amin'ny tranokalanay. Manomboka handeha ny famakafakana ny tranokala ary tsy ho ela ianao dia handray ny tatitra voalohany momba ny toetran'ny tranonkalanao amin'ny masinina fikarohana. Matetika, mety misy lesoka eo amin'ny firafitry ny tranokala, ka ny injeniera SEO dia mandinika tsara ny singa rehetra amin'ny tranokala. Raha fantatra ny lesoka, dia hahazo tatitra amin'ny antsipiriany ianao, ary ny injeniera SEO dia hanafoana azy ireo. Saika tsy manana anjara ao amin'ilay ianao ianao fa tohizo hatrany ireo zava-mitranga rehetra. Aorian'ny fanitsiana ireo lesoka rehetra dia hofidiana ny teny fanalahidy mety. Ity dingana ity dia natao indrindra hanatsarana ny fifamoivoizana tranonkala.
Ny dingana manaraka dia ny fisafidianana rohy amin'ny Internet. Ireo rohy ireo dia natao hampidirana ao anaty loharanon-tserasera. Satria ny milina fikarohana dia mandà votoaty tsy misy dikany, ilaina ny mihazona izany ho ilaina sy misy dikany. Ny asan'ny manampahaizana manokana momba ny Semalt dia ny mifantina loharano mifanentana mba hampidirana ireo rohy. Ny mpitantana ny orinasa dia mandinika manokana ny fihetsiky ny manam-pahaizana manokana, ka tsy hisy hanjo ny tranokalanao raha tsy hisy izany. Azo antoka tanteraka ny tranokalanao.
Ankehitriny dia mila manao ireo fanovana ilaina amin'ny tranokala isika. Ny mpitantana Semalt dia miasa amin'ny maha-consultant ivelany ary manao soso-kevitra amin'ny fanovana ara-teknika. Ny tatitra iray hafa dia mampiseho hoe inona ny fanovana tsy maintsy ataonao mba hahitana vokatra tsara. Mampiasa ny fidirana FTP (File Transfer Protocol) ireo manampahaizana. Ilaina ny fidirana FTP ho an'ny valiny haingana amin'ny fanovana ny milina fikarohana mba hahitana fanovana ilaina. Raha ny fanavaozana hatrany no havaozina, hampahafantatra anao azy ny Semalt ary mampiditra ireo teny fanalahidy. Ny teny fanalahidy dia tsy maintsy mifanandrify amin'ny atiny, voafehin'ny manam-pahaizana ihany koa. Ny hany azonao atao dia ny mijery sy mirakitra ireo valiny mety. Ny vidin'ny isam-bolana amin'ny hazakazaka AutoSEO dia $ 99.
Ahoana ny fiasan'ny FullSEO
Semalt dia manolotra ny fampielezana feno feno FullSEO, izay manome antoka ny fahombiazan'ny fampiroboroboana ny tranokala amin'ny fotoana fohy. Ny fampielezan-kevitra dia misy ny optimization tranonkala ivelany sy anatiny. Ny dingana iray manontolo dia misy dingana mandidy maro. Rehefa tapitra ny dingana roa dia ho avo be ny isa. Toy ny fampielezan-kevitra Semalt hafa, ny FullSEO dia eo ambany fanaraha-mason'ny mpiandraikitra, ny hetsika rehetra dia ataon'ny manam-pahaizana manokana. Vetivety foana dia ho hitanao fa manakaiky ny toerana ambony ny motera fikarohana ny tranonkalanao. Tsara homarihina fa tsy afaka mihazona intsony ny toeran'ny tranonkalanao ireo mpifaninana aminao.
Hanentanana ny fampielezan-kevitra dia mila misoratra anarana ao amin'ny tranokalanay ianao. Raha vao misoratra anarana ianao dia manomboka manadihady mandeha ho azy ny tranonkalanao. Ny hetsika rehetra atao amin'ity sehatra ity dia hampiavaka ny fahatsinjovana anatiny. Ahitana fihetsika maromaro amin'ny fandinihana ny firafitry ny tranokala izany. Hahazo tatitra ianao miaraka amin'ny valin'ny famakafakana ary ny lisitry ny lesoka hita ao amin'ny firafitry ny tranokala. Ny lesoka rehetra dia hanitsy ny manam-pahaizana SEO, ka tsy mila manao na inona na inona ianao. Manaraka, ny manam-pahaizana SEO miorina amin'ny data avy amin'ny tatitra dia mamaritra ny fototry ny semantik. Amin'ny fanamafisana anatiny, ny safidin'ny teny mifandraika amin'ny lohahevitrao sy ny fizarana anelanelan'ny pejy tsirairay dia tena zava-dehibe. Ny teny fanalahidy mety ihany no mampivoatra ny fifamoivoizana tranonkala. Ny fidirana amin'ny FTP dia manampy ny manam-pahaizana manokana hanao ny fanovana ilaina amin'ny tranokala.
Ny manaraka dia ny fanandramana ivelany. Midika izany fa miasa amin'ny backlink ary mameno ny loharano niche miaraka aminy. Tokony ho fantatsika izay rohy mety indrindra ho an'ny milina fikarohana. Anjaran'ireo manam-pahaizana manokana io. Voamarik'izy ireo tsara koa ny atiny. Tokony hanaraka tsara ny dikan'ireo loharano izay hidirany ireo rohy. Io hevi-dehibe io dia azo raisina ho manandanja indrindra.
Semalt dia miasa amin'ny tranonkala marobe azo itokisana, ka tsy hisy olana mandritra ity dingana ity. Hifidy ny loharano miaraka amin'ireo votoatiny mifanentana amin'ny fepetra SEO ilaina ny manampahaizana manokana. Rehefa tafiditra amin'ireo rohy mankany amin'ireo tranonkala ireo ianao dia mety manantena fampiroboroboana mahomby. Ny tatitra tsy tapaka dia mampahafantatra anao ny fiovan'ny tranokala sy ny fitomboan'ny salanisa. Ianao dia mandray anjara amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny maha-mpandinika anao, fa afaka miditra amin'ny fampahalalana rehetra. Mifanantona aminao foana ireo manampahaizana.
Raha terena hanaato ny fampiroboroboana SEO ianao, tsy hiteraka korontana izany. Na dia manaisotra backlink avy ao amin'ny tahirin'ny angon-drakitra ao anatin'ny iray volana aza i Google dia tsy ho ambany tanteraka ny toerana. Mijanona eo amin'ny ambaratonga sasany ny toeran'ny laharana, noho ny fampielezan-kevitra FullSEO. Ho ambony kokoa noho ny teo alohan'ny fampielezana ny haavony. Ny vidin'ny FullSEO dia miankina amin'ny antony maro, ny ankamaroan'ny mifandraika amin'ny toetran'ny tranonkalanao. Ny vidiny farany dia hotendrena aorian'ny fisafoana tranonkala ataon'ireo manam-pahaizana SEO sy ny tsoakevitra nataony. Tsy tokony hampahatahotra anao loatra ny vidin-javatra satria ny vola azo dia avo kokoa noho ny fandaniana ao amin'ny Semalt.
Manoloana ny fiovana lehibe mitranga ao amin'ireo milina fikarohana, dia sarotra be ny miady amin'ny laharan'ny rohy. Sarotra mihitsy aza ny mamantatra ireo hevi-dehibe amin'ny fandaniam-bola izay ahafahan'ny iray miantoka ny kalitaon'ny fandrosoana. Ny teknika taloha dia very ny tokony ho izy, ary ny fomba fampiroboroboana vaovao dia mbola mijanona ho tsy azo antoka. Raha tsy misy famakafakana tanjona, saika tsy azo atao ny ahatanteraka ny vokatra irina hampiroboroboana. Izany no antony nanaovan'i Semalt ny rafitra analytical tsy manam-paharoa izay mikendry ny hamantatra ireo lesoka ara-teknika ao amin'ilay tranokala ary hanamboatra azy ireo. Ny andraikitra lehibe ho an'ny Analytics dia:
Ny mpikaroka dia mahita lesoka mety hitranga amin'ny fanatsarana ny tranokala ary hambara avy hatrany izany. Nefa tsy izany irery no tanjona. Ny rafitra dia manadihady tsara ny votoatin'ny tranokala sy ny mari-pahaizana ara-teknika. Mamakafaka ny tranokalan'ny mpifaninana, manombatombana ny fahaizany mifaninana. Hanombohana famoriam-baovao, mila misoratra anarana ao amin'ny tranokalanay. Ny tatitra taty aoriana dia mampiseho ny toeran'ny tranonkalanao ao amin'ny milina fikarohana ary ny toeran'ny mpifaninana aminao. Amin'ny fampiasana ny fampahalalana azo avy amin'ny tatitra, ny manam-pahaizana dia manamboatra ny fiovana ilaina amin'ny fiheverana ny fenitry ny SEO.
Ny fananana kaontinao dia manome tombony ho anao. Azonao atao ny manampy tranonkala fahatelo ho an'ny kaontinao manokana. Ny tranokala nampianao dia hanombohana ho otomatis fanombanana rehefa mahazo tatitra miaraka amina angon-drakitra. Manavao tsy tapaka ny algorithm ihany ireo milina fikarohana, noho izany ireo mpikaroka ihany no afaka manao fanovana mety eo amin'ny tranokala. Ny famakafakana an-tsipiriany dia ahafahana mamantatra ireo teny fanalahidy marina. Raha tsy misy ny Analytics, tsy azo atao ny misafidy ireo teny fanalahidy mety mifanentana amin'ny atiny amin'ny tranokala. Amin'ny alàlan'ny filoham-pirenena mazava ho azy, afaka mampiditra teny fanalahidy samihafa ianao na manala ireo tsy ilaina. Ny tiana holazaina dia efa nampidirina ny andiany fototra amin'ny teny fanalahidy takiana. Ity fomba ity dia hisy fiantraikany lehibe amin'ny fitomboan'ny fifamoivoizana haingana.
Angon-drakitra famakafakana dia voangona manodidina ny famantaranandro. Ny fandraisanao anjara dia ny fandraisana tatitra momba ny fandidiana ary ny fanitsiana valiny tsara. Azonao atao ny mahazo antoka fa marina ny hetsika amin'ny alàlan'ny milina fikarohana. Mahatalanjona ny valiny: mahita ny toerana ambony amin'ny tranonkalanao ianao. Ambonin'izany, ny mpifaninana aminao dia tsy afaka hampihoatra anao intsony amin'ny milina fikarohana. Manoro hevitra izahay hampiasa ny Application Interface Programming, izay manitsy ny tahirin-kevitra rehetra. Raha tsy miezaka ianao, dia mijanona hatrany amin'ny fanavaozana ankehitriny. Ny serivisy an'ny Analytics dia misy fonosana lehibe telo miaraka amin'ny vidiny hafa:
TANTARANY - $ 99 isam-bolana (teny 1 000, teny 10, tantaran'ny toeran'ny taona 1);
Semalt ihany koa dia manome vahaolana feno ho an'ny fampandrosoana ny tranonkala. Ny manam-pahaizana manokana dia manamboatra tranokala ara-barotra arakaraka ny mombamomba ny mpijery kendrena sy ny tanjon'ny tetikasa dia mamolavola famolavolana tokana, fomban'ny fandaharana. Mampiditra ny singa tranonkala izahay miaraka amin'ireo rindranasan'ny andiany fahatelo sy Rafitra fitantanana ny votoatiny, manamboatra modules e-commerce sy API.
Famokarana horonantsary fampiroboroboana
Ny raharaham-barotra rehetra dia mikendry ny hivarotra ny vokatra na serivisiny ho an'ireo mpihaino kendrena. Lehibe ny tsena ka mora very any amin'ireo mpifaninana aminy raha tsy miteny ny mety ho mpividy sy mpanjifa momba ny tolotra omenao ianao. Mety ho hafa ny dokam-barotra, fa ny dokambarotra iray dia heverina ho mahomby indrindra. Mety hisy fiantraikany amin'ny fihetseham-po mihoatra noho ny endrika hafa izany. Izany no antony mahatonga an'i Semalt manolotra serivisy manokana ho an'ny famoronana horonantsary manokana. Hisongadina ny tombontsoa rehetra avy amin'ny orinasanao ary hitondra fifamoivoizana be amin'ny tranokalanao. Azonao atao ny misafidy format video amin'ny alàlan'ny modely na manome baiko safidy araka izay tianao. Ny horonantsary fampiroboroboana an'i Semalt dia hahasarika mpanjifa maro sy hahomby ny orinasanao.
Fintina ny famerenan'ny orinasa ny momba anay, afaka manoro hevitra izahay ny tsy hieritreritra intsony hoe aiza ny toerana hanaovana ny fampiroboroboana tranonkala mahomby. Hita ihany ny valiny. Izahay dia napetraka amin'ny fomba hafa kely. Manao mihoatra noho ny fampiroboroboana tranonkala fotsiny i Semalt, mahatonga ny olona hanan-karena amin'ny alàlan'ny optimization SEO. Ny fahombiazanao dia ny lazanay. Mifandraisa aminay, vonona izahay handray andraikitra amin'ny maha be dia be anao.